2 Infographics na Psychology na ROI nke Agba na ahia
M a ọkpọ maka agba infographic… anyị na-ama bipụtara ka genders si akọwa agba, agba, mmetụta uche na ịkpọ aha na ma obu ọ bụghị agba mmetụta ịzụ ahịa omume. Ihe omuma ihe omuma a na akowaputa akuko banyere uche na obula na nloghachi nke ulo oru nwere ike iru site n’ilekwasị anya na agba ndi ha n’eji aru oru.
Mmetụta uche nke agba na-adabere na ahụmịhe nke onwe karịa na ihe agwara anyị na ha ga-anọchite anya ya. Agba uhie nwere ike ichetara mmadụ otu ekeresimesi (nke na-ekpo ọkụ, nke dị mma), ebe ọ na-eme ka onye ọzọ chee maka ụgbọala ọkụ n'ụbọchị ụlọ ha gbara ọkụ (adịghị mma)
Red - Ike, agha, ihe egwu, ike, ọnụma, ume, ike, mkpebi siri ike, oke, agụụ na ịhụnanya.
Orange - Obi ụtọ, mmasị, obi ụtọ, ihe okike, oge ọkọchị, ihe ịga nke ọma, agbamume na mkpali
Yellow - Ọ Joụ, ọrịa, onwe onye, ​​obi a happinessụrị, ọgụgụ isi, ịdị ọcha, ọ joyụ, enweghị ntụkwasị obi na ume
Green - Uto, nkwekọ, ọgwụgwọ, nchekwa, ọdịdị, anyaukwu, ekworo, ụjọ, olile anya, enweghị uche, udo, nchedo.
Blue - Kwụsie ike, ịda mba, Nature (Igwe, oke osimiri, mmiri), ịdị jụụ, ịdị nro, omimi, amamihe, ọgụgụ isi.
Purple - Eze, okomoko, oke, ugwu, anwansi, akụnụba, ihe omimi.
Pink - ,hụnanya, ihunanya, ọbụbụenyi, nnabata, agụụ, mmekọahụ.
White - Ọcha, okwukwe, ịdị ọcha, ịdị ọcha, nchekwa, ọgwụ, mbido, snow.
Grey - Ike ọgwụgwụ, ọchịchịrị, nnọpụiche, mkpebi
Black - Mbibi, ọnwụ, ụjọ, ihe ọjọọ, ihe omimi, ike, ịdị mma, ihe a na-amaghị ama, ịdị mma, iru uju, ọdachi, ugwu.
Brown - Owuwe ihe ubi, osisi, chocolate, ntụkwasị obi, ịdị mfe, izu ike, n'èzí, unyi, ọrịa, ịkpọasị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu n'ime etu agba si emetụta akara gị, gbaa mbọ gụọ Dawn Matthew sitere na akwụkwọ Avasam nke na-enye nkọwa zuru oke banyere etu agba si emetụta ndị ọrụ na omume ha:
Psychology agba: Otu agba agba agba si emetụta akara gị
Nke a bụ ihe infographic si Ogologo Uche kacha mma na akparamaagwa nke na agba na nkọwa a ton nke ọmụma otú agba sụgharịa omume na ga-esi!
Tags: mmalitenwaacha anụnụ anụnụaja ajachocolateịdị ọchaagbaụjọcreativityIhe egwuọnwụmkpebintụkwasị obiịda mbà n'obiomimiọchịchọmkpebi siri ikeebubeọrịaakparịIke ọgwụgwụdị mmaagbamumeEnergyọjọObi ụtọimebigabiga ókèokwukwena-adọrọ adọrọegwuunyiọhụrụenyiitirianyaukwugreenGreyujuibuobi ụtọnkwekọrịtaowuwe ihe ubina-agwọ ọrịaolileanyaenweghị ahụmahụọchansogbuọgụgụ isiọgụgụ isiekworoJoyn'anyaokomokoanwansinkà mmụta ọgwụomimiọdịdịNature (Eluigwe.)nnọpụichena-enweghị ọhụụoromaahuhuịgafeudopinkikeugwunchedoọchaPurpleọnụmaredntụrụndụromanceRoyaltynchekwammekọahụọrịamfesnownroEmemeenweghi obi iru alakwụsie ikemkpaliikeịga nke ọman'oge okpomọkụoké osimirin'èzíamaghiọdachiobi iru alaumeaghammiri)akụnụbaWhiteamamiheosisiodo
Isi ihe ise dị mkpa maka ụlọ ọrụ na-achọ ịmegharị iyi ego ọhụụ na nsogbu